တိကျသောပုံသွန်းခြင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း အပူချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် ကုသမှုကို ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်း။
တိကျစွာ ပုံသွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ပုံသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ Castings သည် အဓိကအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် တည်ငြိမ်သော အတိုင်းအတာများရရှိရန် လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုဖြစ်သော annealing နှင့် solution treatment ကို လက်ခံပါသည်။ Annealing Treatment ဆိုသည်မှာ အလူမီနီယံသတ္တုစပ်သွန်းများကို အချို့သော မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် အပူပေးနိုင်သည်။
Dongying Shengyu Metal Precision Casting Fine Processing Method နှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ
Dongying Shengyu Metal Precision Casting သည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ နောက်ဆုံးပုံသဏ္ဍာန်နှင့် နီးကပ်စွာ ကောင်းမွန်ပြီး တိကျမှုရှိသော Casting ကို လုပ်ဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုဘဲ လုပ်ဆောင်မှု အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ၎င်းသည် near-net ပုံစံဖြင့် ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သည်။ အတုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကောင်းမွန်သော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်...
Stainless Steel Castings နှင့် Dongying Shengyu Precision Casting Foundry ၏ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လောင်းခြင်း Riser ၏ လက်ကျန်ပမာဏ
သံမဏိသွန်းလုပ်ခြင်း၏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်သည် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများလုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေရန် အောက်ဆိုဒ်စကေးနှင့် စေးကပ်သောသဲများ ပါဝင်ခွင့်မပြုပါ။ Dongying Shengyu တိကျစွာ ပုံသွင်းခြင်း ထုတ်ကုန်များ၏ အတွင်းအပေါက်သည် စီမံဆောင်ရွက်ဆဲ မဟုတ်ပါ။ ကျန်နေတဲ့ သဲအူတိုင်တွေ...
Stainless Steel Casting ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးများသော အခြောက်နှင့် အစိုသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။
Stainless Steel Casting ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးများသော အခြောက်နှင့် အစိုသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။ Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တိကျသောသွန်းလုပ်ခြင်းကို ပုံစံခွက်မှထုတ်ယူပြီး ကိုယ်ထည်မှလွဲ၍ ပိုလျှံနေသောအစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားပြီး သတ္တုတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်များကို ပွတ်တိုက်ပေးပါသည်။ ဒါဆို လူတိုင်းသိမှာပါ...
Stainless Steel Precision Casting ၊
1. Stainless steel precision casting ၏ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည် အဘယ်နည်း Stainless steel precision casting သည် လွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်း အရည်ပျော်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။ Stainless Steel Precision Casting ၏ အပူချိန်ရွေးချယ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်...
123456 နောက်တစ်ခု > >> စာမျက်နှာ ၁/၁၁